တို့ရှူတဲ့လေ ဘေးကင်းစေ - MYANMORE+
Home News & Features Local တို့ရှူတဲ့လေ ဘေးကင်းစေ
ရန်ကုန်လေထုအရည်အသွေးလျော့ကျလာတယ်ဆိုတာ သတင်းတွေမှာခဏခဏဖတ်နေရလို့ ပရိသတ်တွေသတိထားမိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် မီဒီယာတော်တော်များများကို အရေးပါတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတာကတော့ Air Quality Yangon (AQY) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Facebook page မှာ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာချက်တွေကို မနက်တကြိမ် ညတကြိမ် ကြည့်လို့ရနေပါပြီ။
ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ AQY ကိုလူတွေအများကြီးနဲ့ လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ထင်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ AQY ဟာအသက် ၁၇နှစ်နဲ့ ၂၀ကြား ကျောင်းသူကျောင်းသား ၆ယောက်နဲ့လည်ပတ်နေတာပါ။
သူတို့တွေဟာဆရာဖြစ်သူ Dr. Kirt Page ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ ရန်ကုန်လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာတွေပေးဖို့ AQY ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Dr. Page ဟာ ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့လည်ချောင်းထဲစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိခဲ့တယ်။ ဒါဟာသူရှူသွင်းနေတဲ့လေထဲမှာပြဿနာတခုခုရှိနေလို့ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ပေမယ့် လေထုရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုင်းတာဖို့စက်ကိရိယာတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေမရှိတဲ့အတွက် လေအရည်အသွေးတိုင်းတာရေးစက်တွေတပ်ဆင်ဖို့ အရင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား ၆ယောက်နဲ့အတူ AQY ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
Air Bear လို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဝံရုပ်ကြီးဟာ AQY ရဲ့လာဘ်ကောင် (mascot) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးမှာ AQY ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တွေအကြောင်းမေးမြန်းထားပါတယ်။
၁) ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပိုတွေ့လာရတယ်။ ဒါဟာလေထုအရည်အသွေးကအရင်ကထက်ဆိုးရွားလာလို့လား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် မီဒီယာကပိုပြီးအာရုံစိုက်လာလို့လား။
တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရရင်လေထုအရည်အသွေးကပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) ကလည်းပြောထားပါတယ်။ 2019 World Environment Day မှာလည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကနေတဆင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းလူတွေပိုသတိထားမိလာတာလို့ထင်ပါတယ်။
၂) ရန်ကုန်ရဲ့လေထုအရည်အသွေးကျဆင်းလာမှုကို ဘယ်အချိန်လောက်မှာစသတိထားမိခဲ့ပါသလဲ။
လေထုညစ်ညမ်းနေပြီဆိုတာရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးတချိန်မဟုတ်တချိန်သတိထားမိလာကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်အတိုင်းအတာထိညစ်ညမ်းနေပြီဆိုတာပြောဖို့ အချက်အလက်တွေလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တာ။ ရာသီအလိုက်လေထုအရည်အသွေးအတက်အကျတွေကိုတိုင်းတာနေတယ်။ သိသိသာသာအရည်အသွေးကျသွားပြီိလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့စောပါသေးတယ်။
“တို့ရှူတဲ့လေသတိပြုကြစေ” ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို Bridge နဲ့ Save the Children တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
၄) လေအရည်အသွေးတိုင်းတာရေးစက် ၉ခုကိုရန်ကုန်မြို့အနှံ့တပ်ဆင်ထားတယ်လို့သိရတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြပေးပါဦး။
ဒီအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ Professor ကနေတဆင့်အမေရိကန်သံရုံးက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉မှာ Save the Children က AQY ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီး တိုင်းတာရေးစက်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ အခုဆိုမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမှာပါတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ပညာရှင်တွေနဲ့အတိအကျမစစ်ဆေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပြီး အဲ့ဒီထဲကမှ အမှိုက်မီးရှို့ခြင်းကအဓိကအကြောင်းရင်းတခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သံသယရှိပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ အပူချိန်လျော့နည်းသွားတဲ့အခါ လေထုကအေးပြီးအောက်ကိုသက်ဆင်းလာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်အမွှားတွေက မြေပြင်နဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှာအနည်ထိုင်သွားပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချဖို့ဆိုတာရေရှည်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး လူတိုင်းပါဝင်ကူညီဖို့လိုတယ်။ AQY အနေနဲ့လေထုညစ်ညမ်းစေမယ့်အရာတွေကိုလျှော့ကြဖို့အသိပညာပေးနေပါတယ်။
၆) AQY နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါသလား။
အခုထိ AQY ဟာလူငယ်တွေနဲ့လည်ပတ်နေပြီးအမှီအခိုကင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photos source: Air Quality Yangon Facebook
ရနျကုနျလထေုအရညျအသှေးလြော့ကလြာတယျဆိုတာ သတငျးတှမှောခဏခဏဖတျနရေလို့ ပရိသတျတှသေတိထားမိပွီးဖွဈမှာပါ။ ဒီသတငျးတှနေဲ့ပတျသကျရငျ မီဒီယာတျောတျောမြားမြားကို အရေးပါတဲ့ကိနျးဂဏနျးအခကျြအလကျတှထေောကျပံ့ပေးနတောကတော့ Air Quality Yangon (AQY) ဆိုတဲ့ အဖှဲ့လေးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ Facebook page မှာ လထေုအရညျအသှေးတိုငျးတာခကျြတှကေို မနကျတကွိမျ ညတကွိမျ ကွညျ့လို့ရနပေါပွီ။
ဒီလိုအရေးကွီးတဲ့ကနျြးမာရေးဆိုငျရာအခကျြအလကျတှကေိုပံ့ပိုးပေးနတေဲ့ AQY ကိုလူတှအေမြားကွီးနဲ့ လညျပတျလှုပျရှားနတေယျလို့ထငျရငျမှားပါလိမျ့မယျ။ တကယျတော့ AQY ဟာအသကျ ၁၇နှဈနဲ့ ၂၀ကွား ကြောငျးသူကြောငျးသား ၆ယောကျနဲ့လညျပတျနတောပါ။
သူတို့တှဟောဆရာဖွဈသူ Dr. Kirt Page ရဲ့လမျးညှနျမှုအောကျမှာ ရနျကုနျလထေုညဈညမျးမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုကိုအသိပညာတှပေေးဖို့ AQY ကိုဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။ Dr. Page ဟာ ရနျကုနျကိုပွောငျးရှလေ့ာတဲ့အခြိနျမှာ သူ့လညျခြောငျးထဲစပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈနတောကိုသတိထားမိခဲ့တယျ။ ဒါဟာသူရှူသှငျးနတေဲ့လထေဲမှာပွဿနာတခုခုရှိနလေို့ဖွဈကွောငျးသဘောပေါကျပမေယျ့ လထေုရဲ့အရညျအသှေးကိုတိုငျးတာဖို့စကျကိရိယာတှေ၊ ကိနျးဂဏနျးတှမေရှိတဲ့အတှကျ လအေရညျအသှေးတိုငျးတာရေးစကျတှတေပျဆငျဖို့ အရငျဆုံးကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ ပွောငျးလဲမှုတှလေုပျဖို့စိတျအားထကျသနျတဲ့ကြောငျးသူကြောငျးသား ၆ယောကျနဲ့အတူ AQY ဖွဈပျေါလာပါတော့တယျ။
ဒီအငျတာဗြူးမှာ AQY ရဲ့ကွိုးစားမှုတှနေဲ့ရှဆေ့ကျလုပျမယျ့အစီအစဉျတှအေကွောငျးမေးမွနျးထားပါတယျ။
၁) ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာလထေုညဈညမျးမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးတှပေိုတှလေ့ာရတယျ။ ဒါဟာလထေုအရညျအသှေးကအရငျကထကျဆိုးရှားလာလို့လား၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာလှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့ မီဒီယာကပိုပွီးအာရုံစိုကျလာလို့လား။
တကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ပွောရရငျလထေုအရညျအသှေးကပိုမိုဆိုးရှားလာတယျလို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျး (WHO) ကလညျးပွောထားပါတယျ။ 2019 World Environment Day မှာလညျး လထေုညဈညမျးမှုကိုအဓိကဆှေးနှေးသှားခဲ့တယျ။ ဒီလှုပျရှားမှုတှကေနတေဆငျ့လထေုညဈညမျးမှုအကွောငျးလူတှပေိုသတိထားမိလာတာလို့ထငျပါတယျ။
၂) ရနျကုနျရဲ့လထေုအရညျအသှေးကဆြငျးလာမှုကို ဘယျအခြိနျလောကျမှာစသတိထားမိခဲ့ပါသလဲ။
လထေုညဈညမျးနပွေီဆိုတာရနျကုနျမှာနတေဲ့သူတှအေားလုံးတခြိနျမဟုတျတခြိနျသတိထားမိလာကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ဘယျအတိုငျးအတာထိညဈညမျးနပွေီဆိုတာပွောဖို့ အခကျြအလကျတှလေိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီအဖှဲ့ကိုဖှဲ့ဖွဈခဲ့တာ။ ရာသီအလိုကျလထေုအရညျအသှေးအတကျအကတြှကေိုတိုငျးတာနတေယျ။ သိသိသာသာအရညျအသှေးကသြှားပွီလို့ဆုံးဖွတျဖို့ကတော့စောပါသေးတယျ။
“တို့ရှူတဲ့လသေတိပွုကွစေ” ဆိုတဲ့လှုပျရှားမှုကို Bridge နဲ့ Save the Children တို့နဲ့ပူးပေါငျးပွီးလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။
၄) လအေရညျအသှေးတိုငျးတာရေးစကျ ၉ခုကိုရနျကုနျမွို့အနှံ့တပျဆငျထားတယျလို့သိရတယျ။ အဲ့ဒီအကွောငျးပွောပွပေးပါဦး။
ဒီအစီအစဉျကို ၂၀၁၈ခုနှဈ စကျတငျဘာမှာစတငျခဲ့တာပါ။ Professor ကနတေဆငျ့အမရေိကနျသံရုံးက ငှကွေေးထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၉မှာ Save the Children က AQY ရဲ့လှုပျရှားမှုတှကေိုပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပွီး တိုငျးတာရေးစကျတှကေိုလညျးထောကျပံ့ပေးခဲ့တယျ။ အခုဆိုမန်တလေးနဲ့တောငျကွီးမှာပါတပျဆငျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
ပညာရှငျတှနေဲ့အတိအကမြစဈဆေးနိုငျသေးတဲ့အတှကျအဓိကအကွောငျးရငျးကိုတော့ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။ လထေုညဈညမျးစတေဲ့အကွောငျးအရာတှအေမြားကွီးရှိပွီး အဲ့ဒီထဲကမှ အမှိုကျမီးရှို့ခွငျးကအဓိကအကွောငျးရငျးတခုဖွဈလိမျ့မယျလို့သံသယရှိပါတယျ။ ဆောငျးတှငျးမှာ အပူခြိနျလြော့နညျးသှားတဲ့အခါ လထေုကအေးပွီးအောကျကိုသကျဆငျးလာတယျ။ အဲ့ဒီတော့ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့အညဈအကွေးအမှုနျအမှားတှကေ မွပွေငျနဲ့နီးကပျတဲ့နရောမှာအနညျထိုငျသှားပါတယျ။ လထေုညဈညမျးမှုကိုလြှော့ခဖြို့ဆိုတာရရှေညျလုပျဆောငျရမှာဖွဈပွီး လူတိုငျးပါဝငျကူညီဖို့လိုတယျ။ AQY အနနေဲ့လထေုညဈညမျးစမေယျ့အရာတှကေိုလြှော့ကွဖို့အသိပညာပေးနပေါတယျ။
၆) AQY နဲ့ပူးပေါငျးလုပျကိုငျနတေဲ့အစိုးရအဖှဲ့အစညျးတှရှေိပါသလား။
အခုထိ AQY ဟာလူငယျတှနေဲ့လညျပတျနပွေီးအမှီအခိုကငျးတဲ့အဖှဲ့အစညျးဖွဈပါတယျ။
Previous articleValentine’s Set Dinner “Love is in the Air”